Kooxaha Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man United iyo Tottenham oo isku heysta saxiixa hal ciyaaryahan – Gool FM
Kooxaha Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man United iyo Tottenham oo isku heysta saxiixa hal ciyaaryahan
(Premier League) 09 Okt 2018. Kooxaha horyaalka Premier League ayaa wada doonaya inay kasoo qaataan Borussia Dortmund xiliyada soo aadan mid ka mid ah xidigaheeda ugu bandhiga fiican xili ciyaareedkan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in saxiixa laacibka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ay wada xiiseenayaan shanta kooxood horyaalka Premier League ee Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo Tottenham Hotspur.
Heshiiska 18 jirkan Jadon Sancho ee kooxda Borussia Dortmund ayaa la filayaa inuu ku kici doono aduun dhan 100 milyan ginni, kadib markii uu xili ciyaareedkan qaab ciyaareed cajiib ah kala soo muuqday kooxda reer Germany.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Borussia Dortmund ay u aragto Jadon Sancho badalka saxda ah ee Ousmane Dembélé, kaasoo sanadii 2017-dii kaga dhaqaaqay kooxda Barcelona, sidaas darteed ay aad u adag tahay inay fasaxdo.
Mid ka mid ah laacibiintii hore ee kooxda Real Madrid oo ka door biday Cristiano Ronaldo xidigaha Higuaín iyo Suárez